WOWOW Kitchen Sink Faucets Dhonza Pasi Yakabhururuka Nickel
musha / Kicheni Faucets / Dhonza Faucets / WOWOW Kicheni Sink Faucets Dhonza Pasi Yakabhururuka Nickel
Rated 5.00 Kunze kwe5 yakavakirwa 40 kasitoma ratings
(40 kasitoma wongororo)
Iyo imwechete gomba kicheni faucet yakakwirira arc ine zvakanakira izvi: 360-degree kutenderera, kuchenesa kuchenesa pasina akafa angles mune zvese zvinongedzo
Mvura iri nyore, uye inopisa uye inotonhora mvura inogona kushandurwa zvakasununguka;
Unogona kudzora tembiricha kuda. Kuputika-chiratidzo simbi isina simba yakarongedzwa hose, iri nyore kuisa, kupisa kwakanyanya uye kudzvinyirira kuramba, anti-kukwegura.
2310700 Kuisa Mirayiridzo
Ktchen tinya nekudhonza kunze 2310700
Ndeipi imwe yemhando yakakosha yekicheni yako? Vazhinji vaizopindura tapuro yekukicheni sezvo chinhu ichi chinoshandiswa kakawanda pazuva. Kunze kwezvo, matepi omukicheni anowanzo kutaridzirwa seanonyanya kukoshesa nzvimbo dzekicheni. Pasinei nemhando yekicheni yako. Nechimwe chikonzero kune hanya kwemunhu wese kunozvarwa kwakabatwa nekicheni yekubheka. Kunyangwe chikonzero chekusarudza yakakodzera kicheni kiyi yekugadzirwa kwako kicheni kutsva. Sarudzo isiriyo inogona kutora bhaidhi rese kunze kwekicheni kako dhizaini, kana kuti ungasarudza tapuro yekukicheni isingafarire zvaunofarira zvaunotarisira maererano nekushanda. Chekupedzisira, hunhu zvechokwadi haugare husina kucherechedzwa. Mumwe anogona kuona nyore kuti mhando yekicheni tipi ndeyei uye ndeipi isiri.
Asi unoona sei kunaka? Iwe unofanirwa kushandisa pombi yekubikira yemakore kuti ugone kutonga kana mhando hwepombi yekukicheni iri pamusoro akaenzana kana kwete. Iwe unogona nyore nyore kuona izvi ne nguva yewarandi iyo yekubheka pombi yekugadzira inopa iwe. Mutengesi uyo anopa gore-gore-waranti angatarisira mamwe matambudziko mushure memakore mashoma. Naizvozvo haadi kupa nguva yakareba yewarandi kuitira kuchengetedza mari. Kune rumwe rutivi, kicheni tepe inopa inopa a
Yemakore mashanu-waranti nguva, inovimba nechigadzirwa chayo uye zvirokwazvo inoda kutora basa rayo rekuita kwayo mukati memakore ese ayo. Vanhu vanogona kubvunza, sei asiri gumi-gore waranti? Zvakanaka, kuita kwepombi yekukicheni zvakare kunoenderana nekushandiswa kwayo, kugadzirisa kwayo uye hunhu hwemvura. Komputa yekubheka inogona kuramba yakapfuura makore gumi, asi kugadziriswa kwakanaka uye kutonga kwemvura kuri nani kuvimbisa hupenyu hwakareba.
Dhonza kunze svutugadzike kicheni tap
Vanhu vazhinji vanosarudza dhiraivhu yekubheka yekubheka yekitchen pamusoro peimwe tipi yekicheni. Chikonzero chikuru ndechekuti iwe unogona chaizvo kusvika pane chero chinhu mukati kana kutenderera yekitchen kunyura kwako. Nenzira iyi, kuchenesa kicheni yako hakugone kuitwa zviri nyore neimwe tepi yekicheni. Iine hose yemvura iwe unogona nyore nyore kuwedzera kwako kusvika nemasendimita makumi matatu kune rumwe rutivi. Nepombi yekicheni yakajairwa haungambo svika kure, saka zvichave zvakanyanya kukanganisa kuchenesa. Neiyi yekudhonza kunze kwekuputi kicheni kiyi iwe unozochenesa kicheni yako mune wink yeziso.
Mukana wekubatanidza dhiza repombi yekubheka svutugadzike ndeyekuti unotaridzika zvakanaka uye hauone kuti wakawana pombi yemvura inosvika 4'11 ”. Uku kudhiza kunze kwepombi yekubikira tapuro yeWOWOW kungotaridzika senge yakajairwa pombi yekicheni. Kunyangwe kana iwe uchitarisa padyo, hauzoone mutsauko kubva kune yakajairwa pombi yekicheni. Asi paunodhonza musoro wekupurudzira weiyi dhiza repink yekicheni, unongoerekana waona kuti une hose inodzoreredzwa yemvura iri mumaoko ako. Uye iwe uchashamiswa nehurefu hwayo! Mushure mekushandisa hose yemvura, inozvidzosera kune yayo yekutanga mamiriro, sekunge hapana zvaitika. Ichi chinotsetseka chinodzosera mashandiro neayo inoshanduka mvura hose uye inopokana yakagadzirwa zvinoshamisa, iwe unozoona kamwe.
Kugadziridza kicheni kiyi pombi neinoburitsa kunze chipanje
Ndiani anofarira kuchengetedza kicheni chekicheni? Hapana mumwe wataizofungidzira. Kugadziriswa zvisinei kunonzwika kwakakura kupfuura zvazviri. Iine tapuro yekukicheni, yakakosha zvikuru yekugadzirisa iwe uchafanirwa kuita ndeyekuishambidza zvakanaka. Ehe munhu anofanira kubvisa tsvina mushure mekubheka kubva pombi yekubheka. Nenzira iyi unochengeta kubatirira kwetepi yekicheni kwakanaka. Seiyi fekitini yako yemukicheni inoramba ichipenya kunge ichiri nyowani. Kunze kwezvo, zvakakosha kubvisa zvese zvakaoma mvura zvasara kubva pamukicheni pombi yekupurusa musoro. Kunyanya kana iwe uchigara munzvimbo ine mvura yakaoma kupfuura yakajairwa. Izvi zvinoreva kuti mvura ine chaki yakawanda. Izvi zvinosiya zvimwe zvakasara pane pombi yekukicheni mushure mekushandisa kwega kwega. Izvo hazvina dambudziko zvachose, chero bedzi iwe uchinge uchenesa izvi kazhinji.
Ukasadaro, chaki ichavaka-nguva dzose uye mukupedzisira hazvizove nyore kubvisa zvakare. Izvi zvinogona kupesvedzera mashandiro emavharuvhu, kusvetuka uye kupfira kwetipi yekicheni. Kunyanya kana iwe uchinge uchidhinda kunze svutugadzike kicheni kitipi, ungangoda kuchenesa kicheni yako tap zvakanyanya zvakadzama nguva nenguva. Izvi zvinoita kuti uve nechokwadi chekuti zvese zvakasara zvinobviswa zviri nyore uye nenzira yakakodzera kuvimbisa hupenyu hwakareba hwekuita kwakati kwekuita kwako uchisuka pombi yekubheka yekicheni.
Basa rinoburitsa kunze pombi yekicheni yekupuruzira
Kunze kwekushanda, iyi yekudonhedza pombi yekicheni yekushongedza yakagadzirirwa. Iyo yakakwirira arc chimiro inokupa iwe elegancy uye inoshanda nzvimbo panguva imwe chete. Yakaperera nickel kupedzisa inopa ichi kuburitsa kunze svutugadzike kicheni tembiricha inoshamisa maitiro zvakare. Inokodzera chero muresitorendi kana hotera, asi mukicheni yako yaizopa chaizvo kukwidziridza kwawaitsvaga.
Pamusoro pekuita basa, iyi dhizaini rekubheka svutugadzike rine mabasa matatu emvura kukupa iwe nekunyaradza kwawaitsvaga paunenge uchenesa kicheni yako. Unogona kunyange kumbomira rwizi rwemvura uine bhatani rinokosha mumusoro wepasipure. Nenzira iyi iwe haufanirwe kubata iyo lever kana iwe uchida kubata mvura kwekota chete. Iyo lever inogona kuve yakaitwa-neruoko kamwechete kushanda kugadzirisa mvura tembiricha uye kumanikidzwa kwemvura. Neine 360 ​​degrees kutenderera basa rekicheni yekubheka iwe unogona chaizvo kusvika kunzvimbo dzose.
Waranti inodhonza kunze komuti wepombi yekicheni
Iyi yepamusoro-yekupedzisira dhiza reputi yekicheni yekushongedza yakagadzirwa nemhando yepamusoro yemhando yendarira. Saka WOWOW ine chivimbo chekupa iwe-yemakore mashanu waranti nguva uye 5-zuva rekudzoserwa mari vimbiso. Chivimbo chedu chinofanira kunyatso kukuzivisai nezvekukosha kwemari yatiri kukupai neiyi yekubhururuka pombi yekicheni.
Zvakanakira mukitchen yekubheka nekubuda kunze kwekupfapfaidza muchidimbu:
 Inopa wow-factor kune chero kicheni
 Kusvikira pakakomba nekuda kweiyo dhonza rinobuda kunze
 Yakanakisa uye minimalistic dhizaini
 Zvitatu zviri nyore mvura mabasa
 Smooth retract tekinoroji
SKU: 2310700 Categories: Kicheni Faucets, Dhonza Faucets Tags: Buritsa, Single Handle, mwaya
1x WOWOW Kicheni Faucet (50cm Kupisa & Kutonhodza Mvura Hosi, 1.5m Yakanyanya Kupisa Pressure Resistant PEX Hose), zvishongedzo: Rubha, Gasket, Nut, 1x Mushandisi Chinyorwa, 1x Kurema, 1x 8 inch Deck Plate
Ini ndakashamisika nemufaro nechigadzirwa ichi. Ini ndinotenda ichi iChina chakagadzirwa, asi ini ndaive ndiri-pakati pemapombi ekicheni. Ini ndakatsiva zita rekuti brand faucet nerimwe zita rekuti brand faucet uye ndaifanira kutsiva mubato mukati memakore maviri nekuda kwekuguma kupera. Pasina kana gore gare gare, mubato wakazviita zvakare. Panzvimbo pekushandisa zvakapetwa kane iyo huwandu sezvandakaita pombi iyi, ndakafunga kuti ndichatenga izvi izvozvi. Ini ndaida imwe nguva yekutsvaga, asi ndaida pombi inoshanda. Payakasvika, ndakashamisika neiyo mhando yekuvaka, sezvo yanga isiri pasi peiyo mhando yekuvaka pazita rangu zita rekutanga. Izvo zvikamu zvaive zvakaringana mwero, asi ini handifunge kuti kutenga zvinotsiviwa zvikamu isarudzo. Izvo zviri kutaurwa, pamutengo uyu, ini ndaifunga kuti iyi yaive sarudzo yaigona kuraswa payakatsemuka. Kana ikanditorera gore, ini ndaizofara. Parizvino, zvakanaka. Iyo yakashanda zvisina tsananguro uye kumisikidza kwakanaka mushe / nyore kune chero munhu anoshanda. Kuisirwa kwakanditora kweinenge awa, asi yakawanda yenguva yaishandiswa kwaive kuchenesa kunze kwezasi uye kubvisa pombi yekare. Ndakave neizvi kweinenge mwedzi miviri uye iyo yekumvura mvura yakanaka mune ese ari maviri mashandiro. Nekuti uyu musoro unobviswa, ini ndakawedzerawo huremu pombi kuti ndive nechokwadi chekumisikidzwa pakuchengetedza iyo paruoko rwepombi. Icho chiri chekubatsira, huremu hunochengetedzwa mushe, zvirinani kwazvo kupfuura pombi yangu yapfuura yairamba ichitsvedza. Izvi zvakakosha nekuti musoro wespayer hauna magineti ane sprayer uye huremu ndihwo hunochengetedza. Pakazara, ndinofara neyakavakirwa mhando, zvipoda, uye maficha eiyi poindi yemutengo. Uku kukosha kukuru. Ndingakurudzira.
Ini ndichangobva kutsiva muvaki wangu akakwidziridza Moen pombi ($ 260) neiyo WOWOW Kicheni Faucet Imwe Bata Kicheni Sink Faucets ine Dhonza Pasi Sprayer muBrashi Nickel Commerce. Kunyangwe iyo Moen yaive nyowani (imba nyowani) zvaityisa kushandisa.
Iyi WOWOW Faucet inoyevedza, inotsvedza uye nyore kushandisa. IWOWOW chinhu chiri nani chakagadzirwa kupfuura Moen uye nemutengo unokwikwidza chaizvo. Iyo yekumisikidza yakachengeteka zvakanyanya uye haibude yakasununguka.
Mushure mekupedza mwedzi mina ndichinetseka kuti ndiwane tembiricha uye kuyerera kune kwandinofarira nguva dzese dzandaishandisa dhishi rekicheni, ndinonyemwerera kuti zviri nyore sei kumisikidza tembiricha yemvura uye kuyerera zvakaringana nemubato wakatsetseka uye chaiwo.
Iyo yekudhonza-pasi sprayer inoshanda senge chishongo uye inodzokera kune swan mutsipa pasina kuisundidzira kuenda kumba,
MASHanu NYOTA DZOSE DZAKATENDA
Wowow Faucet yakasvika nekukurumidza uye yakarongedzwa zvakachengetedzeka kuitira kuti hapana chinhu chakamarwa kana kubvarurwa. Pombi yakanaka! Ndezvemazuva ano uye dzakasimba. Yakanakisa mhando uye kukosha kukuru. Kuisirwa kwaive nyore uye pombi ine maburi matatu inokwana zvakakwana pasink yedu yekare. Bhegi iri rinotipa kumanikidza kwakasimba kwemvura zvakare. Ini ndinongoida! Ini ndichave ndichitenga mamwe mapombi emakamuri edu ekugezera uye ndichatarisa kukambani iyi kutanga sezvo ivo vakapa yakanakisa sevhisi sevhisi zvakare.
Yechembere yedu yaive diki uye yaisanetsa. Pombi ino yekubikira inoiuraya. Ndakaona pombi iyi yaive yakachipa kupfuura mazhinji emamwe marita anozivikanwa. Pombi yakauya nepakeji izere uye mirairo .Kuisa kwacho kwaive nyore uye unofanirwa kuzviita nemoyo murefu. Musoro wekupfapfaidza unobatwa munzvimbo nehuremu hwakaiswa pasi pesingi. Iko kumanikidza kwemvura kwakadzikama uye kwakatsetseka. Zviri nyore kudzora. Yakareba. Ndicho chikamu chedu chatinofarira. Yakanyanya nyore kushambidza zvese.
Ndine makore makumi matanhatu nematanhatu uye ndakavhiyiwa mitsipa miviri saka kuve pasi pekambani yaive basa rakaoma kwandiri asi semunhu aimbova Marine handina kumbokanda mapfumo pasi! Isa yakawanda sezvinobvira pamwe chete usati waisa! Ndiyo nzira yakangwara!
Bvisa imwe yacho wotanga kuchenesa pamusoro penzvimbo yekushambidza woenda kubasa!
KANA iwe usiri wakanaka kururamisira, murume anoshanda, nekuti inoshaya mirairo yakanaka, ini ndinokurudzira Plummer neimwe nzira iwe unogona kuzviita.
Iyo yakanaka uye inoshamisa pombi! Mudzimai wangu anochida seni. Imwe bhegi repombi yekicheni rakagara chete makore matanhatu! Ndinovimba iyi inozogara kwenguva refu, yakareba zvakare sezvo iri nani kuvakwa!
Izvi zvinokwevera pasi pombi yemukicheni inoita yedu yepazasi yewaini bhawa singi kutaridzika kwemazuva ano. Pombi iri nyore kuisa. Ini ndinoda iwo madhigirii mazana matatu emadhigirii andinogona kudhonza kuti ndigeze kona yega yega yesingi. Zvakare, iyo imwechete yekubata mashandiro inoita kuti hupenyu hwangu huve nyore. Ini ndinogona kugadzirisa tembiricha yemvura zvakanaka. Pamutengo wandakabhadhara, pombi iyi yakakodzera.
Bhegi iri rakaiswa kweinenge mwedzi mumba mangu izvozvi & rave rakanakisa kusimudzira kukicheni yedu. Kuiswa kwanga kusiri nyore sezvazvaifanira kunge kubvira hosi dzakabatanidzwa dzaive pfupi pfupi- ndaifanirwa kuwana mamwe mabheji & zvinongedzo kuti ndisvike pombi dzemvura
Pombi iri mune yakanaka mhando, inorema, yakaoma, ine mukombe mukati (zvirinani izvo zvandiri kuona), refu uye yakapfava pombi. Tichaona kuti zvichagara kwenguva yakareba sei. Ndichadzoka ndigadzirise chirevo changu kana paine nyaya.
Ini ndinoona vaisa vhidhiyo yekumisikidza munguva pfupi yapfuura, iri pachena. UNOFANIRA kuitarisa usati waiswa.
Unyengeri hwangu: Iwe haufanire kuisa nemubato padivi. Chaizvoizvo ini ndinofarira uye ndakaisa ine mubato kumberi, hapana dambudziko parizvino. Ndakakumbira mumwe munhu kuti andibatsire kuisa. Iko kuisirwa kuri nyore kwazvo. Asi dambudziko rangu nderekuti ini handina zvishandiso zvekuburitsa faucet repakutanga, iro rakakora zvakaipa.
Ndakafadzwa kwazvo newangu pombi! Ini ndaingoziva kuti vaive $ 130 yakaderera pane anozivikanwa mazita emhando saka ndaifanira kuyedza. Iyo yekumisikidza yaive yakapusa uye hapana chikonzero chekudaidza nyanzvi. Iyo tepi inoshanda chaizvo. Kwe $ 70 hapana chaiko kunyunyuta nezvazvo.
Ndakabhadhara kunge $ 80? Ndakaona mapombi akafanana emadhora zana nemakumi matanhatu. Ndakapedza neawa ndichidhonza iyo yekare, asi izvi zvakapinda mumaminitsi gumi kana zvakadaro. Iwo mirairo yaive isina kujeka, asi ini ndakatsiva anopfuura mashoma uye ndaisada. Kurumidza kununura, huremu hwakanaka, zvinoita kunge zvinotapira!
Ini ndaishandisa kutsiva pombi yangu yekicheni. Kuiswa kwaive nyore. Mubato mumwe chete unogona kudzima mvura munzvimbo ipi neipi kungave kunopisa kana kutonhora sekushora pombi yakare, inogadzirwa neDelta, panodzimwa mvura nechibato chete munzvimbo yekumira. Iwe unogona kusarudza pfapfaidzo kana yakatwasuka uye bhatani kuti umbomira. Iwe unogona kubvisa iyo spout chero kupi musingi kuti iite nyore kuchenesa.
Mukufunga ichi chigadzirwa chakakosha. Yakagadzirwa ne brashi nickel, chimwe chinhu chakafanana nesimbi isina simbi. Chinhu chimwe chete chandinofarira nezve pombi ndechekuti pane hosi yakawedzerwa yaunogona kudhonza pasi kuti ushandise chinangwa chakasiyana. Mubato wacho wakasununguka. Zvinhu zvakanaka zvinoshandiswa patubhu.
Wakaiswa izvi kwemwedzi yakati wandei izvozvi uye zvinoshanda zvinoshamisa. Ivo vanoisa zvaive nyore kwazvo. Ndakanga ndine nguva yakaoma kubvisa yekare. Iyi yakaiswa mumaminetsi uye yanga ichishanda hombe kubvira.
Ndakafadzwa kwazvo newangu pombi! Iyo yekumisikidza yaive yakapusa uye hapana chikonzero chekudaidza nyanzvi. Ini ndinoda zvese nezvazvo, iyo inodhonza pasi sprayer, iyo kukwirira, kumanikidzwa kwangu kwemvura kwakawedzera zvakanyanya! Ini handikwanise kuiburitsa yakazara izere kana ndasvika pakubika nekuti ndingaite nyonganyonga huru! Ivo zvakare, vane yakawedzerwa garandi iyo inongoratidzira kuvimba kwavo muchigadzirwa chavo.
Kumisikidza zviri nyore, nemirairo isingabatsiri; zvingangodarowo kwete kutumira mirairo zvachose. Nezvo izvo zvataurwa chaizvo pombi yakanaka pamutengo wakanaka kwazvo.
Iyi faucet yekicheni iri nyore kushandisa. Hunhu hwakanaka zvakare hwakanaka, zviri nyore kudzora kuyerera kwemvura.Iyo iri nyore kushandisa, ndinoifarira zvakanyanya.
Ndakashandisa pombi yekuisa sezvo ini ndaishaya hunyanzvi maturusi ekubvisa pombi yekare. Ndinoda kushanda zvakanaka uye kunaka kwepombi iyi.
Pombi iri yepamusorosoro uye inoshanda mushe, kugona kutambanudza tambo kunongoita kuti ive yakakosha zvakanyanya pamwe nekushandisa pakuchenesa. Izvo zvinhu zvakagadzirwa ndezvemhando yepamusoro uye ini handisi kuwana chero zvikanganiso mune ino faucet. Ndiri lovin it!
Ida pombi iyi. Ndiri kugadzirisazve kicheni yangu uye pombi nyowani yaive pamusoro pachinyorwa. Bhegi iri rakaratidza kuti ndizvo zvandaitarisira.
Pombi yangu yazvino yaitaridzika kunge yechinyakare uye yechinyakare, asi ini ndaisada kushandisa tani kuti ndiitsire. Mabheji uye zvigadziri uye zvinowanisa mutengo, asi izvi zvaive nemutengo wakaringana uye zvinotaridzika ZVAKANAKA zviri nani pane akawanda emhando yepamusoro mutengo. Kuisa kwakanditorera nguva shoma, asi zvakazara, kufadzwa kwazvo nechigadzirwa ichi.
Ndaifanira kuwedzera mitsara yangu asi mune yekare imba. Chigadzirwa chaive nani ipapo pandakafunga. Zvirinani ipapo iya yandakatenga yeimwe sink kubva kuchitoro chehardware.
Mirayiridzo ingadai yakave yakajeka zvishoma asi mamwe emavhidhiyo mavhidhiyo akabatsira. Ndakanga ndisina chiitiko chekutanga uye ndakakwanisa kuwana ziso dema nechipanera asi rinotaridzika zvakanaka. Wanga uchishandisa kwemwedzi mishoma uye pasina nyaya.
Ndiri kufara kwazvo nepombi iyi! Yakanyanya nyore uye yakananga kuisa. Inoshanda zvikuru uye hapana chinonzwa chakachipa. Inotaridzika uye inoshanda zvinoshamisa! Zvakanyanya kukurudzira!
Iyo yakanaka kwazvo uye yakapusa kuisirwa, yakafanana neruvara, inowirirana netiles yangu mukicheni mangu.
Zviri nyore kwazvo kumisikidza ini ndinoda kuti ine 3/8 'pombi saka haufanire kunetseka nezvayo ichivhara neyimu kana calcium sezvakawanda magadzirirwo matsva ekuchengetedza mvura anoita.
ndine pombi yekare yekicheni, uye ini ndinongoitsiva, ndinofarira pombi iyi, zviri nyore kuisa iwe unogona kuzviita iwe pachako uye uine kukosha kwakanaka.
Kushamisika kukuru! Ini ndinoda dhizaini, tarisa uye nekunzwa kwekushandisa kwepombi. Iyo yakavakirwa mu sprayer yakanaka !! Ndakaona zvakare kuti kumanikidzwa kwemvura kuri nani kwazvo kupfuura pombi yangu yapfuura yaive kushamisika kwakanaka.
Kuiswa kwaive nyore. Ndingakurudzira iyi pombi kune chero munhu anofunga kuitenga.
Ndatambira pombi kwemazuva mashoma. Murume wangu akariisa nezuro. Kumisikidza zvakapusa.Ichibvumirano chakanaka.Takaisa pombi iyi pasinki redu rekicheni. Hapana kubuda kana kurembera pasi. Tinoda izvi.
Anoshamisa pombi yemari yacho !! Hapana matambudziko ekudzidziswa kwatiri. Inoshanda yakakura uye saka inobatsira chaizvo.
Minimal rairo yekusimbisa yekumisikidza maitiro asi zvese zvikamu zvakabatana zvakasarudzika mushe uye ese mabasa akanaka.
Ndakatenga faucet iyi inenge mwedzi mitanhatu yapfuura uye ndagutsikana kwazvo nekushanda kwayo uye inoratidzika kunge yakanaka kwazvo
Ndakaongorora ndisati ndatenga. Tambo inopisa iri ipfupi pane yazvino yandinayo. Hapana dambudziko, takawana kuwedzerwa kuAce. Saka zviri nyore kutsiva. Inotaridzika yakanaka, kuyerera kwakasimba. Ndingakurudzira pombi iyi.
Chigadzirwa chakanaka chose pamutengo. Iyo kamwene inodhonza pasi nyore. Isu takaiswa yekuisa mapombi nekuti mapombi edu emvura aive padhuze nemadziro edare remakurukota.
Isu takanga tisina chokwadi pakutanga sezvo isu tanga tisati tambonzwa nezve ichi chiratidzo asi takasarudza kuyedza zvichibva pane ese makuru maongororo. Isu tinofara kwazvo nepombi iyi. Hunhu hwakakura, tarisa hwakanaka, hunofamba mushe, mutengo wakakura uye kurongedza kukuru. Isu takave nayo kwerinenge mwedzi ikozvino uye hatigone kufara.
Ndinoda kutsiva pombi yangu yekare yekicheni uye ndinofunga iyi ndiyo sarudzo yakanaka. Iyo inouya ne3 maburi mahwendefa echangu chekare. Pane vhidhiyo papeji reAmazon kuraira nzira yekuisa. Zvinongotora maminetsi gumi neshanu kupedzisa kuisa. Kuyerera kwemvura kwakatsetseka uye kwakasimba.
Ini ndakasarudzika, ndinoita tsvagurudzo yakawanda uye ndinowanzoenda kumazita emhando uye handina kumbobvira ndadzika pasi pemutsara, ndosaka ndakamboita tsvagurudzo ndisati ndawedzera iri risingazivikanwe-kwandiri zita rechiratidziro kune yangu ipfupiso yemazita anozivikanwa e dhizaini yakafanana neinopfuura kaviri kana katatu mutengo. Zvimwe zvinhu zviviri zvinonetsekana: 1. Ongororo shomanana dzakataura kuti kudhonza hakuna kudzosera kumashure uye kudzoka panzvimbo kwayo, kuruboshwe kwakarembera. Ndiyo chaiyo nyaya yekumisikidza. Pane huremu hunoda kugadziriswa, huri nyore nyore, ipapo hunoshanda zvakakwana. 2. Ruvara - iwo mafoto airatidza kuti anga akaita kunge bhurasho simbi isina grey grey, asi rakagadzirwa kubva kubrashi nickel, iyo inogona kuve nerudzi, inodzivira uye neruvara yandaive nehanya nayo yaisaenderana neangu SS zvishandiso. Ini handina kuwana chero wongororo inotaura nezve icho chinhu kana mumibvunzo, saka ndakazvibvunza mubvunzo ini ndikatambira mhinduro huru dzichindisimbisa kuti haina ruvara rwe brownish uye yaizoshanda nemidziyo yesimbi isina chinhu. Iro rakaratidza kuve zano rakanaka, ndinokutendai kune avo vanhu vakatora nguva yekupindura mubvunzo wangu, handina kuodzwa moyo. Ichi chigadzirwa chakasimba chemhando, dhizaini ine yekudhonza pasi uye yekumwaya ficha inoshamisa, masinki angu haana kumbobvira akachena kudaro! Chinhu chega chandisingakwanise kutaura ndechekugara kwenguva refu nekuti kwaingova nemwedzi chete, asi semapombi mazhinji emukicheni, anogara achishandiswa, uye ini handina chikonzero chekufunga kuti hazvingagare zvakafanana nemhando dzinodhura. Sarudzo huru, chienda, chengetedza iyo $, ndinofara kukurudzira pamwe nenyeredzi shanu.
Mushure meongororo yangu yepakutanga, sevhisi yakabatana neni kuti ndibatsire kutsiva pombi isina kukwana kunyangwe yapfuura iyo Amazon yekudzoka hwindo. Nerubatsiro rwavo ndakakwanisa kugadzirisa pombi asi uku vachiratidza kutumirwa kwekutsiva zvakadaro kana ndikatadza kugadzirisa yekutanga. Dambudziko raive rekuti mukati mekubata mashandiro aibvumidza mubato kuti ufambe uchienda padivi kugadzirisa tembiricha asi kwete kumusoro uye pasi kuvhura kuyerera kwemvura. Iyo yaida kutorwa ikaparadzaniswa uye kugariswa patsva kuitira kuti ishande zvizere. Iyo faucet ikozvino inoshanda sezvanga zvichitarisirwa uye iko kutarisisa ndizvo chaizvo zvandaida. 5 nyeredzi dzevashandi vekambani ino!
Chekutanga: Bhegi iri rakanaka uye mutengo wacho waive chaiwo, zvinosuwisa kuti haushandi. Hapana mvura inobuda. Mubato unofamba uchienda padivi kuchinjika pakati pekupisa / kutonhora asi haufambe kumusoro uye pasi kuvhura pombi. Ndakaona mamwe makomendi nemibvunzo ine chekuita nekushaya mvura saka ndinofunga inogona kunge iri nyaya yegungano pane zvimwe zvinhu. Zvese zvekubatanidza zvaive zvakasunganidzwa nemazvo uye magetsi ekupa mavharuvhu akavhurwa. Sehumwe humbowo hwekuti mvura yaivepo uye yaiwanika ndakaona kuti mvura yakadonha kubva muzvikomba mushure mekunge ndadimbura pombi. Sezvo ini ndakaitenga iyo mwedzi yakati wandei yapfuura kune yangu yekuwachira imba remodel iyo yanga ichangopedzwa ini ndakanyadziswa zvakanyanya kuti handikwanise kushandisa ino yakanaka pombi uye ikozvino hwindo rekudzoka rapera saka zvinoita sekunge ndakabatirira naro.
Pombi yedu yekicheni nguva pfupi yadarika yakafa uye takaraira pombi iyi seinotsiva, tichifara kuti tichaigamuchira nekukurumidza uye tigokwanisa kuiisa kupera kwevhiki rino kuti titangezve kushandisa sink yedu yekubikira. Nekudaro, isu patakavhura bhokisi, isu takabva tacherekedza kukanda kukuru mukupedzisa pane refu refu chikamu chepombi. Iyi zvirokwazvo inyaya yeQC sezvo kukwenya kuchizopedzisira kuita ngura, tisingatauri zvinoita sekunge kwakashata. Isu takagumbuka zvakanyanya nekuti ikozvino hatichashandise dhishi redu rekicheni kudzamara tawana imwe. Uku kunetsekana kukuru. Ini handigone kutenda chimwe chinhu chakadai hachina kubatwa panguva yekutarisisa mhando chigadzirwa chisati chaiswa mukati uye kutumirwa! Kushungurudzika zvakanyanya sezvo isu tanga tichinyatsotarisira kuisa ino pombi yekicheni uye nekunyura kwedu nekumhanya zvakare!
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ndakagadziridza ongororo yedu kubva pa1 kusvika ku5 nyeredzi nekuda kweakanakisa basa revatengi ratakatambira mushure mekutumira ongororo yedu yekutanga. WOWOW ingangove yakanakisa sevhisi sevhisi yati tambo gamuchira kubva kune chero kambani. Vakatitumira pombi isina hurema kuburikidza neDHL courier kubva kuChina iyo yakasvika mumazuva mashoma pamwe neplate diki, zvakare kubva kuChina kuburikidza neDHL. Kana tangoisa pombi takaifarira, inotaridzika uye inoshanda nemazvo. Kamwe zvakare, WOWOW akanyatsoenda pamusoro uye kupfuura kuti agadzire mamiriro ezvinhu isu uye isu takafadzwa kwazvo nebasa ravo revatengi.
Bhegi iri rinotsiva makore gumi nemashanu "zita rechiratidzo" rimwe chete rekubata rine dhonza-pasi yemusoro musoro. Pombi iyi yakanga yatanga kuyerera pamusangano wevharuvhu mumuviri wepombi uye ini ndaisada kuyedza kugadzirisa iyo. Yakapedza 15 - maawa matatu kuburitsa chekare unit… ngura uye kubvarura shinda zvakaita kuti chikamu ichi chebasa chikwanise kugadziriswa. Izvo uye neyakaipa michina dhizaini yechinyakare yuniti yakagadzirirwa ropa rakawanda, ziya, uye misodzi pane yangu chikamu.
Ukuwo, pombi nyowani yakaiswa uye kuyedzwa mumaminitsi makumi matatu nemashanu. Yakabatana tambo dzakabatana dzeanopisa uye anotonhorera zvinongedzo uye imwe hombe yakamisikidzwa kubatanidza kwepombi kuti inyure interface ... voila, zvaitwa.
Ive neshuwa uye wedzera Teflon chisimbiso tepi kune inopisa / inotonhora yekuisa yekubatanidza; haina kuiswa mupakeji. Iwo iwo mirairo yakanyorwa mune imwe vhezheni yeinoratidzika kunge yeOuter Mongolian yakashandurwa kuChirungu izvo zvinogona kukonzeresa kuperesa kwehuropi mune chero girama yechikoro mudzidzisi, kureva. "Kuisa kupedzisa uye kuyedza kuburitsa kana kwete." Nekutenda mifananidzo yacho yakanaka kwazvo kuita kuti zvikamu zvemazwi zvinyanye ... asi zvichiri kuseka.
Zvese zvakaverengerwa mupakeji (kunze kwekusimbisa tepi); escutcheon plate, spare gaskets, allen wrench, uye 3/8 kusvika 1/2 adapters yeiyo inopisa / inotonhora kubatana (kana zvichidikanwa)
Mushure mezvose zviri kutaurwa pombi nyowani inoshanda zvakanyanya uye inovandudzika chaizvo pamusoro peiyo yekare. Ini ndaikurudzira zvikuru uye ndaizowedzera kuti mutengo waive unosvika madhora makumi manomwe neshanu - $ 75 pasi pezita rechiratidzo rakaenzana. Kana izvi zvikatora sekureba seicho chakatsiva, ini ndichafara kwazvo.
Ndakafadzwa kwazvo newangu pombi! Ini ndaive ndiri mukushaiwa chaiko uye ndaisaziva chinhu pamusoro pemapombi, kungori mashoma emazita ezita. Mukutsvagurudza kwangu ndakawana iyo WOWOWU uye ongororo yega yega yaive yakasarudzika. Ini ndaingoziva kuti vaive $ 100 yakaderera pane anozivikanwa mazita emhando saka ndaifanira kuedza. Iko kuisirwa kwaive nyore uye hapana chikonzero chekudaidza nyanzvi Ini ndinoda zvese nezvazvo, iyo inodhonza pasi chipfapfaidzo, iyo kukwirira, uye kumanikidza kwangu kwemvura kwakawedzera zvakanyanya! Ini handikwanise kuiburitsa yakazara izere kana ndasvika pakubika nekuti ndingaite nyonganyonga huru! Rega ndikutaurire kana Home Depot yave nekutengesa kukuru mazuva mana mushure mekunge ndaisa pombi yangu nyowani ini handina kana kuyedzwa kuti nditarise. Ivo zvakare, vane yakawedzerwa garandi iyo inongoratidzira kuvimba kwavo muchigadzirwa chavo.